Iskaashiga Horumarinta | Suomen Somalia-verkosto
Marka lagu daro ururada xubnaha ka ah, Shabakadda Soomaaliada Finland (Finnish Somalia Network) waxay fuliyaan mashaariic horumarineed oo kala duwan oo laga fuliyo dhammaan gobolada Soomaliya iyo Geeska Afrika.
Marka lagu daro ururada xubnaha ka ah, Shabakadda Soomaalidada Finland (Finnish Somalia Network) waxay fuliyaan mashaariic horumarineed oo kala duwan oo laga fuliyo dhammaan gobalada Soomaaliya iyo Geeska Afrika.
Hadafka Shabakaddu waxaa kale oo uu awoodda saarayaa sidii loo fududayn lahaa howlaha shaqo ee ay wadaan bulshada rayidka sida ka shaqaynta nabadda iyo mashaariicda horumarineed ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika.
Mashruuca Sahansaho Wuxuu ka socdaa Cadaado, Buhodle iyo Gaalkacyo.
Mashruuca Ramaad Wuxuu ka socdaa Guricel, Dhuusomareeb, Ceel Cade iyo Afmadow.
Mahruuca Hiil Hooyo Wuxuu ka socdaa deegaanada Puntland iyo Somaliland.
Mashruuca Rajo Wuxuu ka socdaa deegaanada Puntland iyo Somaliland.
Mashaariicdaan waxaa ka qeyb qaadanaya Min 3 urur oo ka howlgala Finland, iyo min Sadex Urur oo ka howlgala deegaanka.
Mashaariicdaan waxeey ka shaqeynayaan qeebaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan ilaalinta deegaanta, hooyada iyo dhalaanka, iyo Shaqo u buurista dhalinyarada.
Mashaariicdan waxaa maal geliyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Finland, halka Somalia Network iyo Ururada Xubnaha ka ah ee ay Mashruuca wada Fulinayaan ay ka mas’uul yihiin Maamullidda mashruuca iyo bixinta 15 % Mashruuca ku baxaysa oo ay soo uruurinyaan Ururada Mashruuca la fulinaya Somalia Network.